TXGN6-12 Inflatable chinja cabinet
Akazadzisa insulating zvinogadzirwa
Customizable mukuru kukwira
Inflatable chinja cabinet
The chinja cabinet iri modular Unit muoti, izvo dzinogona kubatanidzwa maererano hunoshandiswa siyana, uye rinoumbwa wakaiswa dzakabatana uye extensible dzakabatana kundochingamidza vanoda kuchinja kushandisa tsindirana chinja cabinet mu substations siyana.
TXGN6-12 Inflatable chinja cabinet ane rakanamwa chose hurongwa. All waro mhenyu zvinoriumba uye haizoshandisi vari akanyudzwa mukati Stainless simbi goko, kuti chinja yose mudziyo haisi kukanganiswa nomudzimu zvokunze kwezvakatipoteredza ezvinhu, saka unogona nechokwadi nokushanda akavimbika uye kuchengeteka, uye kuona kuchiitwa nazvo-free. By kuvasarudza extensible busbar, chero mubatanidzwa anogona kuzadzisa zvizere modularization. Nevazukuru busbar chengetedzo kuputira uye kudzivirirwa kuitira mukuru akavimbika uye kuchengeteka. TXGN6-12 mhando Inflatable chinja cabinet kunogona kugovera TV kushandisa michina mhinduro, zvinoumba pfungwa akangwara chinja, uye kuderedza Batsiranai mabasa yeminda chokugadza debugging.
TXGN6-12 mhando Inflatable chinja cabinet ndiyo non-extensible mureza configuration uye extensible mwero configuration. Nokuda wemishonga zvizere module uye hafu module uye yayo expansibility, ane inokosha chaizvo kunzwisisa.
TXGN6-12 mhando Inflatable chinja zvokurimisa GB mureza.
Magadzirirwo upenyu pasi indoor ezvinhu (20 ℃) ​​kwazvo makore 30.
Product womuenzaniso uye zvinoreva
Inflatable mhando chinja cabinet
TXGN6-12 dzino Inflatable cabinet SF6 gasi sezvo chinhu chakakombama ukabvisa uye kuputira svikiro.
Chinja cabinet zvizere chisimbiso, zvakazara insulated; busbar, chinja uye kurarama zvikamu vakachengetedzwa akanyudzwa Stainless simbi deko
Kamuri izere SF6 gasi pamusoro 1.4bar, uye dziviriro mugwaro iri kukwira IP67 :. The chinja yose mudziyo akasununguka zvachose pasimba ezvinhu kwokunze zvakatipoteredza. Kunyange mumiedzo ezvinhu akadai tinongorarama kwemakore mashoma mumvura, kuti chinja inogona vakavhiyiwa anowanzoita uye chigadzirwa zvinogona Nokuraramisa isina upenyu.
The chinja cabinet ine akakwana "shanu kudzivirira" nokupiringidza mudziyo, izvo zvinogona kubvisa zvachose vashandi uye midziyo atadze kushanda zvakanaka anokonzerwa kukanganisa kwevanhu.
All makabhati chinja vane yakavimbika yakachengeteka kumanikidzwa ruyamuro migero, kunyange muzviitiko kuitira kuchengeteka kwezvinhu dzaishandisa.
Chinja cabinet rakakamurwa wakaiswa chikwata mubatanidzwa uye extensible chikwata mubatanidzwa.
Chinja makabhati kazhinji fronted uye kunze mutsetse, uye zvinogonawo iiswe munzvimbo dzakasiyana-siyana kuti vawane divi nzira yokubudisa kana divi kuwedzera
Kukura cabinet zviri nyore kuisa uye kunogona kuva yakakodzera nzvimbo diki uye varombo ezvinhu dzezvakatipoteredza.
Chinja cabinet inogona configured yemagetsi, kure kuzvidzora uye kuonekwa mano maererano siyana zvinodiwa vanoshandisa.
C module mutoro chinja
F module vasanganiswa magetsi
Kusurukirwa / grounding chinja
Vacuum (dunhu) mudariki
Power maitikiro kutsungirira voltage (chete / kuputswa)
Mheni maitikiro kutsungirira voltage
Rated up-loop kusaora iyezvino
Rated waya uchiraira uye muchirwadzisa iyezvino
Rated pfupi-redunhu zvokuita ano (nhamba)
Rated urengarenga budirira iyezvino
Rated pfupi-nguva kutsungirira iyezvino
Rated pfupi-redunhu kusaora iyezvino
Rated chinja razvino
Kunonyanyisa kwazvino fuses
Previous: TXGN66-12 (Z) Fixed akanyudzwa nokuchinja mudziyo mukuru voltage nokuchinja mudziyo
Next: TXGNH-12 Box-mhando wakaiswa simbi-akanyudzwa nokuchinja mudziyo mukuru voltage nokuchinja mudziyo
Tichitevedzera Abb-Type Ring Main Unit
Tichitevedzera Schneider-Type Ring Main Unit
Indoor Ring Main Unit Zindoga chinja
TD dzino Intelligent Kuparadzirwa kushandisa michina S ...
TKYN28-12 warrior bvisika AC simbi-akanyudzwa S ...
TZN63 (TVBM7) -12 Side-akatasva indoor yakakwirira Volta ...
TFZ (R) N-40.5 dzino High voltage chinja uye ru ...
TZW10-12 Outdoor mukuru voltage Vacuum redunhu <br> ...